Visual Effects မော်ကွန်းတိုက် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: Visual Effects
Hollywood Professional Association (HPA®) သည် ၂၀၂၀ HPA ဆုပေးပွဲအတွက်ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားများကို ၀ င်ရောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ် ၁၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုကျင်းပသော HPA Awards သည် HPA အသိုင်းအ ၀ ိုင်း၏တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်အရောင်ကိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ အသံနှင့်ပုံရိပ်ရိုက်ကူးခြင်း၊ အဆိုပါဖြစ်ရပ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင် ...
Visual Effects ကျောင်းသည်လက်ရှိအကျပ်အတည်းကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်နှင့်အနာဂတ်တိုးတက်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတန်းနှင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုပြုပြင်သည်။ သြစတြေးလျတောင်ပိုင်း Adelaide - Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ တင်းကျပ်သော quarantine တားမြစ်ချက်များကြောင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ခက်ခဲစေသည်။ သို့သော်ပြisingနာကိုဖြေရှင်းရန်အဓိကပြtoနာဖြစ်သော Rising Sun Pictures သည်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေပြီးရှာဖွေသည်။
Rising Sun Pictures မှအမျိုးသမီးအနုပညာရှင်များသည်အမျိုးသားများလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားသောစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ခဲ့သည်
သြစတြေးလျတောင်ပိုင်း၊ Adelaide - သမိုင်းကြောင်းအရ၊ အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများ (VFX) လုပ်ငန်းတွင်အမျိုးသားများလွှမ်းမိုးသောလုပ်သားအင်အားရှိသည်။ ကျား၊ မကွဲပြားမှုသည်ဘုတ်အဖွဲ့တစ်လျှောက်တွင်ရှိသော်လည်းအနုပညာရှင်နှင့်ကြီးကြပ်ရေးအခန်းကဏ္ in များတွင်အမျိုးသမီးများသည်ရာထူးနေရာအနည်းငယ်သာရရှိထားပြီးဆယ်စုနှစ်များစွာရှိသည့်နေရာများတွင်ထင်ရှားသည်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါဟာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲနေပါတယ်။ Captain Marvel, Wonder Woman နှင့် Rogue One စသည့်အမျိုးသမီးများ ဦး ဆောင်သည့် blockbusters များကဲ့သို့ပင် ...
Rising Sun Pictures 'Jennie Zeiher: ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် VFX ၏လှိုင်းစီးခြင်း
၎င်းကိုအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများတွင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် Zeiher မှသူမအရည်အချင်းနှင့်စတူဒီယို၏အောင်မြင်မှုသည်ဇွဲရှိရန်နှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ သြစတြေးလျတောင်ပိုင်း Adelaide - စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲနှင့် Rising Sun Pictures မှအမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး အနေဖြင့် Jennie Zeiher သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးစီမံကိန်းများအတွက်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုစတူဒီယို၏ရှေ့ဆက်စာရင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ့ကို ဦး ဆောင်သည်။ Zeiher သည်နိုးကြားစွာနေရန်စဉ်းစားသည်။
Ncam က Robin Shenfield ကိုဥက္ကဌအဖြစ်ခန့်အပ်သည်
မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်အောင်တိုးတက်စေသောနည်းပညာကို ဦး ဆောင်သူ Ncam Technologies သည်ရော်ဘင်ရှီးဖီးကိုဥက္ကChairman္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဤမဟာဗျူဟာအခန်းကဏ္,တွင် Shenfield သည်သူ၏ VFX နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလွန်အတွေ့အကြုံများအားပြောင်းလဲနေသောအချိန်ရှိ VFX ကမ္ဘာတွင်အသုံးချကာ Ncam အဆင့်မြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အောင်မြင်ရန် ...
Rising Sun Pictures ပညာရေးသည်ကျောင်းသားများကိုအောင်မြင်သော VFX လုပ်ငန်း၌အောင်မြင်ရန်ပြင်ဆင်ပေးသည်
Adelaide စတူဒီယိုသည်အနုပညာကျောင်းသားများ၏ယနေ့အထိ၎င်း၏အကြီးဆုံးအတန်းကိုကြိုဆိုရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ Adelaide တောင်ပိုင်းသြစတြေးလျ - လာမည့်လတွင်၊ သြစတြေးလျတောင်ပိုင်း Adelaide ရှိ Rising Sun Pictures (RSP) တွင်အချိန်ပြည့်လေ့လာရန်နှင့်စတူဒီယို၏လေးစားဖွယ်ကောင်းသောလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်မျှော်လင့်ထားသောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများ (VFX) ဒါဇင်သုံးဒါဇင်နီးပါးရောက်လာလိမ့်မည်။ အချို့မှာတောင်သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများဖြစ်သည်။